कबाड बन्दै विद्युत् उपकरण
कबाड बन्दै विद्युत् उपकरण उचित संरक्षण तथा सम्बद्र्धन नगरिँदा कबाड बन्दै गएको डोटीको दिपायलस्थित पिपल्ला विद्युत् सब स्टेसनमा रहेका करोडौँ मूल्यका विद्युत् उपकरण ।
गरिबले निःशुल्क पाउने मिटर बक्समा असुलिएको पैसा फिर्ता दिन उजुरी
खोटाङ, ३२ साउन । गरिब घरपरिवारलाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने मिटरबक्समा विद्युत् विस्तार उपभोक्ता समितिले रकम असुलेको भन्दै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीका उपभोक्त...
भोजपुर, ३० साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भोजपुर वितरण केन्द्रले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ८२५ विपन्न परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गरेको छ । केन्द्रले कमजोर आर्थिक अवस...
तानसेन, २२ साउन, पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा तितेपातीको तेल उत्पादन शुरु गरिएको छ । करिब १५ वर्षअघि नै सोको उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना गरिएको भए पनि प्रभावकारी ढङ्गले चल्न सकेको थि...
अन्योलता हट्यो, हाउस वायरिङ्ग तारमा ८–१० प्रतिशत मुल्य वृद्धि
साउन, काठमाडौ । व्यवसायीहरुमा अन्योलताका विच हाउस वायरिङ्ग तारको मुल्य वृद्धि भएको छ । गत हप्ता विद्युत संसार साप्ताहिक हाउस वायरिङ्ग तारको मुल्य वृद्धि विषयमा व्यवसायी नै अन्योलता विषयमा समाचार प्...
तारको मुल्य वृद्धिको विषयमा व्यवसायीहरु नै अन्योलमा
साउन काठमाडौं । हाउस वायरीङ्ग तारको मूल्य वृद्धिमा निमा अन्तर्गतका व्यवसायी नै अन्योलमा परेका छन् । साउन १ गते बाट हाउस वायरीङ्ग तारको मुल्य वृद्धि भनिए पनि केही व्यवसायीहरुले मुल्य वृद्धि भईनसकेको...
विद्युत संसार,जेठ,काठमाण्डौं ।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सर्वसाधारण जनताले न्यून मूल्यका गाडीबाट लाभ लिन सक्ने भएकाले विद्युत् बचत गर्ने नाममा महँगो विद्युतीय गाडी किनेर रकम विदेशिन न...
कोरोना महामारीको बीचमा पुुन हाउस वायरीङ्ग केबुुलको मुल्यवृद्धि
काठमाडौं १६ बैशाख । केबुल उद्योगीहरुको साझा संस्था निमाले कोरोना भाइरस कोभिड १९को महामारी विच पनि हाउसवायरीङ्ग तारको मुल्य बढाएको छ । गत माघ महिनामा १० प्रति...
१० वर्ष ग्यारेन्टि सहित नेप इण्डियाको स्वीच नेपाली बजारमा
काठमाण्डौ, चैत । नेप इण्डियाले १० वर्षको ग्यारेन्टि सहित विभिन्न प्रकारका स्वीच नेपाली बजारमा ल्याएको छ । सन् २००४ देखि भारतमा स्थापना भएको नेप इण्डिया कम्पनिले १० वर्षको ग्यारेन्टि सहित ४ प्रकारका...
एल एण्ड टी ब्राण्डका स्वीच गेयर र मोडुलर स्वीच नेपाली बजारमा
काठमाण्डौ,फागुन । विगत २७ वर्षदेखि नेपाली विद्युतीय बजारमा गुणस्तरीय विद्युतीय तथा कन्स्ट्रक्सनका सामग्रीहरु बिक्रि वितरण गर्दै आईरहेको क्षमादेवी लाइट हाउस प्रा.लि. ले फेरि एल एण्ड टी ब्...
६३ अर्ब लागतमा ५० चार्जिङ स्टेसन निर्माणको तयारी
काठमाण्डौ,माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६३ अर्ब लागतमा ५० वटा सुपर चार्जिङ स्टेसन बराबरको लगानीमा साधारण चार्जिङ स्टेसन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले चार्जि...
जाडो मौसममा इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिकको हिटर बजारमा
काठमाण्डौ, पुस । विद्युतीय व्यावसायिक बजारमा लामो समय देखि आफ्नो छुटै पहिचान बनाउन सफल एन. जि. इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि.ले विभिन्न प्रकारका प्रोडक्टहरु नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।...
एचपिएलको डिलर मिट कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाण्डौं,पुस । आज भन्दा ६३ वर्षअघि स्थापना भई विद्युतीय क्षेत्रका हरेक सामानहरु उत्पादन गर्र्दै आइरहेको एचपिएल ब्राण्डले आफ्नो डिलरहरुको लागि राखिएको भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गत शु...
एलजीको आर ३२ रेफ्रिजेरेन्ट एसी नेपाली बजारमा
काठमाण्डौ, पुस । एलजीको आधिकारी बिक्रेता चौधरी ग्रुप अन्तर्गत सिजी ईम्पेक्सले एलजीको आर ३२ रेफ्रिजेरेन्ट भएको एयर कन्डिसन नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले विगत ३० वर्ष...
काठमाण्डौं,पौष । ग्राहकहरुको पहिलो रोजाईमा क्रम्टन इलेक्ट्रिक गिजर परेको छ । क्रम्टन ब्राण्डका गिजरहरु गुणस्तरीय,भरपर्दो र उपभोक्ता तथा प्रविधिमैत्री भएकोले ग्राहकहरुको पहिलो रोजाईमा परे...